We Fight We Win. -- " More than Media ": အစိုးရ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသေး
အစိုးရ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသေး
လွန်ခဲ့သည့်ရက် အတွင်းက လူအများစိတ်ဝင်စားသည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ နေပြည်တော် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း အပြောင်းအလဲသတင်းများတွင် ဒု သမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နုတ်ထွက်စာတင်သည့် ကိစ္စလည်း အဓိက ပါဝင်သည်။
. ယင်းသတင်းကို ဧရာဝတီနှင့် ပြည်ပမီဒီယာများက ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်တွင်းမှ Venus ဂျာနယ်နှင့် မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ်တို့က ပုံနှိပ်ဖော်ပြရန် ကြိုးစားခဲ့ကြရာ စာပေစိစစ်ရေး ၏ ခေါ်ယူသတိပေးခြင်း၊ ဆင်ဆာပိတ်ပင်ခြင်းများ ခံခဲ့ကြရသည်။
ယင်းသို့ ပိတ်ပင်ခြင်းသည် ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ (UNESCO) က မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဦးစီးကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒု ၀န်ကြီး ဦးစိုးဝင်း၏ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ကတိပြုမှုကို သံသယဝင်စေသည်။
ထို့အပြင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုသည့်နေ့တွင် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းပါ ပွင့်လင်းမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုရှိသည့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စေရမည်ဟူသော ကတိကဝတ်ကိုလည်း ချိုးဖောက် ရာရောက်သည့် အပြင် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော စာနယ်ဇင်းများ၏ အရေးပါသော ကဏ္ဍကို လျစ်လျူရှု ရာပါရောက်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတဦးဦး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မှု ရှိ မရှိသတင်း သည် နိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသည်။ ဤသတင်းကို လူထုက သိပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။
အကယ်၍ ဒု သမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နုတ်ထွက်စာတင်သည်ဆိုသော သတင်းသည် ကောလာဟလ ဆိုပါက အချက်အလက်သတင်းမှန်ကို အစိုးရအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသင့်သည်။ သို့သော် သက်တမ်း တနှစ်ကျော်လာသည့်တိုင် ယနေ့အထိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ တွင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မတွေ့ရသေးပေ။
အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း အခြေအနေ အပြောင်းအလဲကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှသာ ပြည်သူ အများက သိရှိနိုင်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ မည်မျှအကျိုးရှိ မရှိကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ သုံးသပ်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အစိုးကလည်း လူထုက တုံ့ပြန်သောအသံကို မီဒီယာများမှတဆင့် ကြားနိုင်သည်။
ယခုကဲ့သို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ ထွက်ပေါ်နေသည့် သတင်းများအပေါ် ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည် စာနယ်ဇင်း မီဒီယာများ၏ ရေးသေားဖော်ပြနေမှုများကို မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံရာရောက်ပြီး အစိုးရ ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်နေပါသည်ဟု ပြောဆိုချက်အပေါ် ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဧရာဝတီ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။.